China Dhivha Bhegi Tote ine Stroller Straps Kugadzira uye Fekitori | Kinghow
Iri bhegi bhegi bhegi rine rakasiyana rinoshandura bonde uye rakasungirwa bhegi bhegi, kwete chete ine zvese zvakakosha zveiyo yakasarudzika diap tote bhegi, asi zvakare inogadzirwa yemhando yepamusoro zvinhu uye yakakwana dhata dhizaini yekusangana ese mabasa amai nababa zvinodiwa. Yakakwana kune ese hupenyu hwezuva nezuva uye kufamba.
Mucheka Tote Bag Zvimiro
Stylish Unisex Dhizaini yaMadzibaba & Moms - mutoro wekutakura manapukeni uye zvinhu hazvingowira kuna amai chete asi vanababa zvakare, nekuti mwana anouya nezvinhu zvakawanda pakuenda, iyi unisex dhizaini bhegi bhegi rakanakira vanababa naanamai, haina kunyanyisa mukadzi kana murume uye iwe unogona kuitakura iko kushandiswa kwezuva nezuva.
Yakavhurika Dhizaini dhizaini - iyo yakavhurika yakavhurika dhizaini inogona kukupa iwe kukurumidza kuwana kana mwana wako achisvipira kana kuda chinjo yenguwo pane kutsvaga kwese kwese.
Kunze Kunodikanwa Homwe - iro diaper bhegi rine maviri ekunze muhomwe yezvakasiyana seti zvevana zvinodiwa senge mwana mabhibhi, pacifiers, zvipunu, fomura yekupa uye chigero nezvimwe.
Premium Simbi Zvikamu - iyo yemhando yepamusoro simbi zvikamu inovimbisa kuti iyi bhegi inogara yakasimba kugara kwemakore
Saizi Yakakodzera - kana zvasvika pamabhegi emuchira, saizi inokosha zvakanyanya. Saizi yeiyi chaning bhegi yakakwana uye inogona kubata zvese zvinodiwa nemwana uye haizotaridzika kunge yakakura kwazvo kana diki. Uye bhegi redhivha rinogona kusungirirwa pane pram uye kusunungura maoko ako.
Tactical Hydration Pack neTPU Mvura Bladder
Heavy Duty Canvas Bhegi